VaTomana Votoreswa Mhiko seMuchuchusi Mukuru weNyika
WASHINGTON — Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, neChitatu vakatoresa mhiko VaJohannes Tomana kuti vave muchuchusi mukuru wenyika kana kuti Prosecutor General sezvakatarwa nebumbiro idzva remitemo yenyika.
VaTomana vatoreswa mhiko kuState House. Asi VaMugabe havasati vadoma muchuchusi mukuru wehurumende, kana kuti Attorney General, sezvinodiwa nebumbiro idzva remitemo yenyika.
Vamwe vakuru muhurumende vanoti basa iri rinognba kuenda kunhengo yeZanu-PF yakakundwa musarudzo dzekutsvaga anomirira Zanu PF kuChivi Central, VaMunyaradzi Paul Mangwana.
Vamangwana vaive sachigaro weZanu-PF mukomiti yeparamende yaitungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika.
Bumbiro idzva iri rakatanga kushanda gore rino, uye ndiro rakashandiswa pasarudzo dzakaitwa munyika. VaMangwana vakatomboudza Studio 7 kuti musoja webato zvekuti vakadomwa kuti vatore basa iri, vakagadzirira kuritora.
Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaJeremiah Bamu, vanoti VaMugabe vanofanira kudoma muchuchusi wehurumende nechimbi chimbi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, uye vari gweta, VaGabriel Shumba, vanotiwo VaTomana havana maoko akachena pachitariswa mabatiro avaiita nyaya vari muchuchusi wehurumende sezvo pakatyora kodzero dzevanhu ivo vakapeta maoko.
Hurukuro naVaJeremiah Bamu
Hurukuro naVaGabriel Shumba